Khilaafka masar iyo itoobiya halka uu salka ku hayo, iyo fursadda soomaaliland
Saturday July 18, 2020 - 08:34:39 in Maqaallo by Wariye Khaliil Barre
Khilaafka masar iyo itoobiya halka uu salka ku hayo, iyo fursadda soomaaliland Maqaalkii kan ka horeeyay waxaynnu ku lafa-gurnay bilawga khilaafka dalalka masar iyo itoobiya, iyo in Masar la kulmi doontaa halis xaalad abaareed iyo inay waayi karto in kabadan hal milyan oo shaqooyin ah iyo qiyaastii $ 1.8 bilyan wax soo saarka dhaqaalaha sanad walba. Buuxinta GERD inuu saameyn weyn ku yeelan doonto saamiga biyaha ee Masar - iyo innay ku yareyn doonaan10 illaa 15 bilyan oo mitir kuyuubik.
Maanta waxaynu eegaynaa isha-dhaqan-dhaqaale ee uu uleeyahay itoobiya biyo xidheenka wabiga niilku.
Qorshayaasha Itoobiya ayaa ah inay dhisto taariikhda biyo xidh lagga dhalinaayo dab illaa iyo 1960-meeyadii, laakiin waxaa dib loogu dhigay arrimo siyaasadeed iyo dhaqaale awgeed. Dalku wuxuu la il daran yahay koronto la'aan iyo horumar la'aan inkasta oo ilihiisa biyo badan maraan. Dadkeeda itoobiya oo laggu qiyaaso 100 million ayaa saameeyay dhaqaale-yari baahsanni, haddaba si ay u kobciso dhaqaalaheeda una horumariso nolosha dadka waa inn ay innay ku guulaysayaa ka midho dhalinta mashuuraca " GERD ". Itoobiya waxaa ka jira koronto la'aan daran boqolkiiba 65 . Biyo-xireenka muranka dhaliyay ayaa ah $ 4.8 bilyan oo doollar waxaana laga dhisayaa shirkadda loo yaqaan 'Blue Nile', oo u dhow xadka u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan. Waa inay siiso koronto malaayiin guryo ah oo ku yaal Itoobiya sidoo kale waxay siinaysaa fursad ay koronto uga iibiyaan waddamada deriska la ah ee. GERD waa udub dhexaadka dalabka Itoobiya ee ah in ay noqoto kan ugu dhoofinta badan Afrika, iyada oo la saadaaliyay in la abuuri karo in ka badan 6,000 megawatts.
Sida laga soo xigtay (The New York Times), dhammaystirka iyo buuxinta biyo-xidheennkan ayaa ka dhigaysa Itoobiya "awoodda ugu weyn ee dhoofisa dabka Afrika." Waxay labalaabi doontaa awoodda jiilka korontada ee Itoobiya, taasoo u oggolaanaysa inay kasbato ugu badnaan hal bilyan oo doollar sanadkii dhoofinta tamarta loo dhoofiyo Suudaan, Koonfurta Suudaan, Jabuuti, Kenya iyo, suurtagal ahaan, Masar. Biyo-xidheenku wuxuu u sugi lahaa koronto umada u hanqal taagaysa wuxuuna labada dhinacba kicin karaa koboc dhaqaale isla markaana wuxuu lacag ku soo qaadan karaa iibka korontada ee caalamiga ah. Intaas waxaa sii dheer, Addis Ababa
waxay u arkeysaa GERD mashruuc qaran iyo mid madaxbanaan oo ay tahay in dalalku ixtiraamaan. Waa riyo qaran oo run noqotay. Iyada oo aamminsan in GERD ay ilaalin doonto xuquuqdeeda dabiiciga ah ee biyaha isla markaana ay kor u qaadi doonto ka faa’iideysiga, Itoobiya waxay qaadatay istiraatiijiyad muddada fog ah oo lagu gaari karo ujeedo laba geesood ah: 1) in la abuuro qaab-dhismeed cusub oo sharciyeed kaas oo ka hor imaan doona heshiisyada wabiga Niil isla markaana soo saari doona xaqiiqooyin wanaagsan. iyo 2) in la go'doomiyo Masar iyo Suudaan oo laga takhaluso inta hartay Nile Basin dalalka kale iyada oo loo marayo CFA. Si loo hubiyo, dhismaha iyo ka shaqeynta GERD ayaa ah soo afjarida istiraatiijiyaddan, waxayna umuuqataa in Itoobiya ay gaadhay labada hadaf. GERD waxay noqon kartaa dhacdo biyo-gelin ku ah taariikhda casriga ah ee Itoobiya, taasoo muujinaysa dib-u-dhalashadeeda inay tahay awood gobal iyo mid muhiim ah.
Magaalka kan ka danbeeya ayaynnu ku lafaguri isaganna hannaanka ay soomaalilaan uga faa'idaysan karto fursada laba-geesoodka ah ee hortaala, taaso midiba ta kale kaga culustahay.
W/Q: nimcaan bihi